Lower Luangwa - our home
Our home and main hunting area is Munyamadzi Game Reserve in the Lower Luangwa Valley. In addition to Munyamadzi, Thor also has exclusive marketing and hunting rights on the neighbouring Kazumba Game Reserve. Munyamadzi and Kazumba are part of, and situated in the middle of, six private reserves on the eastern bank of the Luangwa River. On the western bank is the West Petauke GMA. This part of the Luangwa Valley is slowly becoming one of Africa's most successful conservation stories and is already one of Africa's top hunting destinations.
Species available on Munyamadzi and Kazumba are as above with the addition of Sable antelope and Chacma baboon.